महिला कार्यकारी पदमा पुग्न उम्मेदवार बन्नै सकस : नेतृ सिंह :: कमला भण्डारी :: महिला कार्यकारी पदमा पुग्न उम्मेदवार बन्नै सकस : नेतृ सिंह
बिहीबार, असार ९, २०७९ कमला भण्डारी
पार्टीको विभिन्न गतिविधिमा सकृय देखिने महिलाहरु मध्ये मोनिका सिंह जनता समाजवादी पार्टी ( जसपा ) की केन्द्रिय सदस्य हुन् । पार्टी कमिटि र अन्य पार्टीका गतिविधिमा प्रायः महिलाहरुको उपस्थिति प्रसस्त देखिन्छ । उनी पनि यस्ता कार्यक्रममा देखिन्छिन् । तर जब निर्वाचन आउँछ उनी जस्ता महिलाहरु निकै पछाडी पर्छन् । झन् विभिन्न प्रमुख कार्यकारी पदहरुमा भने महिलाको नाम सायदै देखिन्छ । नेतृ सिंहको सन्दर्भमा पनि त्यो कुरा मेल खान गएको छ । पर्साको वीरगन्जमा अन्य राजनीतिक गतिविधि भने उनी निकै अग्रभागमा देखिने महिला नेतृहरु मध्येकी हुन् । महिला नेतृत्व अगाडी आउनु पर्छ भनी अरु समयमा आवाज उठाउने महिला नेतृ आफै निर्वाचनमा चाही पछाडी पर्नुको कारण लगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रही उनै महिला नेतृ मोनिका सिंहसँग गरिएको बिशेष कुराकानी :
१).तपाई राजनीतिलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ ?
राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडी शिक्षिका भएर काम गरे । जब लोकसेवा आयोगको तयारीको क्रममा अध्ययन् गर्दा नीति नियम बनाउने तहमा बसेर काम गर्न सक्यो भने केही मानिसहरुलाई मात्र सेवा नभई सम्पूर्ण देश भित्र बसोबास गर्ने ३ करोड जनताहरुको लागि सेवा दिन सकिनेरहेछ भन्ने महसुस भयो । त्यसैले नेपालको कानुन, नीति नियममा बनाउने र समृद्ध नेपाल बनाउन शिक्षित व्यक्तिहरुको आवश्यक्ता महसुश गरी म राजनीतिमा लागेको हो । जनताको हितका लागि नीति नियम बनाउने, स्वच्छ सेवा भावले काम गर्ने र समृद्ध देश बनाउने क्षेत्र भनेको राजनीति क्षेत्र नै रहेछ भनी यो उद्देश्यका साथ मैले राजनीति क्षेत्रलाई रोजें ।
२) स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको उपस्थिति कस्तो पाउनु भयो ?
अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभरमा ११ जना मात्र महिलाहरु प्रमुख पदमा थिए । यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभर २५ जना महिलाहरु प्रमुख पदमा निर्वाचित भएका छन् ।
माओवादी पार्टी र अरु प्रजातान्त्रिक पार्टीहरुको बलबुतामा संविधान बन्यो । संविधानमा ३३ प्रतिशत महिलाको लागि सिट आरक्षण गरियो । यसपालीको स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीहरुबीच गठबन्धन गरिएकोले प्रतिशतको हिसाबमा महिलाहरु प्रमुख पदमा उमेद्वार कम उठाइए । संविधानमा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकमा महिला अनिवार्य हुनु पर्ने भन्ने प्रावधान छ । तर पनि स्थानीय निर्वाचनमा संविधान अनुरुप व्यवहार भएन ।
३) महिला नेतृत्वका लागि किन उपेक्षा गरियो जस्तो लाग्छ ?
निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडी नेताहरुले महिलाको वारेमा राम्रो कुरा गर्छन् । तर जब निर्वाचन आउँछ । तब एक दुई जना नेताले मात्र महिलालाई साथ र सहयोग गर्छन् । महिलाले निर्वाचनमा जित्यो भने के गर्न सक्छन् र ? भन्ने जस्तो कुरा गरेको पाइन्छ ।
धेरै शक्तिशाली नेताको छोरी, बुहारी र श्रीमतीहरु निर्वाचनमा सजिलै जान सक्छन् । तर साधारण नेताहरुलाई राजनीतिको पदमा नै जान असहज छ । नेताहरु ठुल्ठुला कुरा गर्छन् । तर व्यवहारमा उत्तार्दैनन् । जो महिलाको परिवार राजनीतिमा हुन्छ । उसलाई सबै पार्टीका पुरुष नेताहरुले निर्वाचनमा साथ सहयोग गर्ने र कोही नहुनेलाई टिकटसम्म पनि नदिने बढी उपेक्षा गरेको पाइन्छ । समग्रमा यो ठिक होइन ।
४) यस्तो अवस्थामा महिलाहरु कसरी अर्थपूर्ण र राजनीतिमा आउने त ?
नेताहरुले बनाएको नियम सवैले पालना गर्नुपर्छ । जसले नियम बनाउछ उनिहरुले नै नियम पालना नगरेको पाइन्छ । धनी,गरीब महिलाहरु कुनै न कुनै तरिकाले पीडित भईरहेका हुन्छन् । महिला माथि राजनीति गरिन्छ तर हामी महिला आफै राजनीति गर्न आएका हौं ।
निर्वाचित आयोगले देशमा न्याय भयो कि भएन भनेर खोज्नु पर्छ ।महिलालाई आरक्षण चाहिन्छ । मन्त्रीपरिषद हुन्छ त्यसमा महिला खोज्नु पर्छ । नाम कहलिएका प्रमुख नेताहरुले आफ्नो एस.महिलाहरुलाई मात्रै संसदमा लाने वा पद दिने गर्दछन । महिलाहरुले सक्षम तरिकाले कुरा राख्न सक्छन र पीडित महिलाहरु बोल्न सकेको हुदैनन् । उनिहरुलाई सक्षम बनाउन विभिन्न योजना वा कार्यक्रम राख्नुपर्दछ । महिलाहरुले राजनीति गर्दा विशेष ध्यान दिने गर्नुपर्छ ।
५) तपाई मेयर पदको लागि योग्य भए पनि पार्टीले निर्वाचनमा टिकट नदिनुको कारण के हो ?
म प्राध्यापकको जागिर छाडेर राजनीतिमा सक्रिय भएर लागेको युवा र शिक्षित महिला हो । मेयर पदमा चुनाव लड्न सिफारिसका लागि पनि धेरै संघर्ष गर्नु प¥यो । पार्टीले काम गर्न सक्ने योग्य व्यक्तिको पहिचान गर्न नसकेको कारण मैले टिकट नपाएको हो । चुनावी प्रचार–प्रसारका लागि प्रशस्त मात्रामा खर्च गर्न सक्ने व्यक्तिलाई टिकट दिने र कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई टिकट नदिने पार्टी भित्रको प्रचलनले गर्दा पनि मैले टिकट नपाएको हो ।
६) आगामी दिनको यात्रा कता भन्ने त सोच्नु भएको छैन नि ?
मेरो यात्रा आगामी दिनमा पनि निरन्तर राजनीति क्षेत्रमा रहेर जनताको सामाजिक कार्यमा सहयोग गर्नु नै हुनेछ । पार्टीले मलाई उपमेयर पदमा चुनाव लड्न भने पनि म मेयर पदको दावेदारका लागि सक्षम व्यक्ति हो । म कहिल्यै पनि पदको लागि पछाडी हटेर चुनाव लड्दिन । आगामी दिनहरुमा पनि म आफ्नो हैसियत र क्षमताको आधारमा पाउने पदका लागि पार्टी भित्र संर्घष गर्छु । म समाजसेवी व्यक्ति हो । निरन्तर पार्टी भित्र रहेर काम गरिरहन्छु । कहिल्यै पनि हिम्मत हार्ने छैन । यो पटक पार्टीले टिकट नदिए पनि अर्को पटक अवश्य नै मेयरको टिकट पाउँछु भन्ने विश्वासमा छु ।
७) हालको निर्वाचनमा कस्ता महिलाहरु निर्वाचित भएका छन् ?
अहिलेको निर्वाचनमा निर्वाचित महिलाहरु कहिले पनि घर बाहिर ननिस्केका र राजनीति के हो ? भन्ने पनि थाहा नभएका महिलाहरु छन् । पार्टीले यस्ता महिलाहरु मात्र चयन गरेको देखियो । ती एजेण्डाहरु पास गर्न संख्या देखाई हात उठाउने खालका मात्र छन् । जनताका समस्याहरुलाई पहिचान गरी सम्बन्धित विषयलाई सम्बन्धित ठाँउसम्म पु¥याउने क्षमता नभएका महिला उमेदवार उठाएर पार्टीले उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यभन्दा पनि बहुमत र अल्पमतलाई अगाडी बढाउने खालका मात्र महिला दिदीबहिनीलाई अगाडी सारेको छ ।
८) अन्त्यमा तपाई थप केही भन्न चाहनु हुन्छ ?
जनता प्रतिको सेवामा कहिले पनि पछाडी हट्ने छैन । म निरन्तर समाजिक सेवामा लागिरहनु पर्छ । एक दिन अवश्य सफल हुनेछुं । पार्टीले पनि निस्क्रिय व्यक्तिलाई टिकट दिनुभन्दा राजनीतिमा सक्रिय भएर लागेको व्यक्तिलाई टिकट दिएमा राम्रो हुन्थ्यो । सबै राजनीतिमा लाग्ने युवा महिला र पुरुष नेताहरुलाई न्याय मिल्ने थियो । तर यसमा पार्टीहरुले अलि ध्यान पु¥याउन सकेनन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ९, २०७९ १४:५१